Masoja, Mapurisa Ozara Munzvimbo Dzinogara Vanhu Vakawanda
Kukadzi 28, 2011
Hurumende yaisa masoja nemapurisa anozivikanwa nerekuti Gondo Harishari mumisha inogara veruzhinji muHarare nemuChitungwiza. Zvinonzi pane kuratidzira kuri kuda kuitwa neveruzhinji kuchatanga neChipiri.
Zvinonzi veruzhinji vachaenderera mberi nekuratidzira uku munyika yose kudzamara mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vabva pachigaro.
Asi vamwe vanotiwo hurumende yaisa masoja aya nemapurisa, kuitira kuti idzivirire mhirizhonga ingangoitike kana kuratidzira kuri kunzi kuri kurongwa neZanu PF kukaitika.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti munyika mungangove nekuratidzira, iyo yaita kuti hurumende iise mauto ane zvombo pamwe nemotokari dzehondo mumigwagwa, chiratidzo chekuti hapana hurumende yemubatanidzwa iri kutonga, asi kuti iZanu PF ichine masimba sezvaingoitika kare.
Nyanzvi idzi dzinoti vanhu vachiri kuramba vachingosungwa nekushungurudzwa munyika sezvaiitika makore apo hurumende yemubatanidzwa yakanga isati yaumbwa.
Senzira yekuratidza kuti hurumende haisi kutamba, vanhu vanga vachionekwa vakaungana muBulawayo, vanonzi vanga vachirohwa nemauto nemapurisa.
MDC inotiwo nhengo yayo, Patrick Kamanga, apambwa mangwanani eMuvhuro kuMagaba muMbare nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF, uye haasi kuzivikanwa kuti aripi.
MDC yati mapurisa epaMatapi Police Station aziviswa, asi aramba kutora matanho.
Ukuwo vanhu vakawanda vanosanganisira mutungamiri weMDC 99, VaJob Sikhala, mutungamiri weInternational Socialist Organization, kana kuti ISO, VaMunyaradzi Gwisai, pamwe nevamwe vavo makumi mana nevana, uye nhengo dzeMDC T dzinosanganisira VaDouglas Mwonzora, vamwe vevanhu vachiri muhusungwa zvichitevera kusungwa kwavo vachinzi vane chekuita nekuda kukonzeresa mhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezvemitemo, uye vari sachigaro weNCA, Professor Lovemore Madhuku, vatiwo kana nguva yekuti vana veZimbabwe vasimuke vachiratidzira yasvika hapana chinokwanisa kuvamisa kusanganisira mapurisa nemauto vari kunzi vazadzwa mumigwagwa ava.